Kune Mitsara Pane Yangu iPhone Screen! Heino Kugadzirisa. - Iphone
aripi mapikicha angu ekare
iphone wont batidza yapfuura apple screen
Kune Mitsara Pane Yangu iPhone Screen! Heino Kugadzirisa.
Uri kuona mitsara pane yako iPhone skrini uye hauna chokwadi nei. Dambudziko iri rinowanzoitika kana yako iPhone's LCD tambo ikadzimwa kubva kune yayo logic board, asi inogona zvakare kunge iri software dambudziko. Muchinyorwa chino, ndicha tsanangura nei paine mitsara pane yako iPhone skrini uye kukuratidza maitiro ekugadzirisa dambudziko racho zvakanaka !
Kutanga, ngatiedzei uye titonge kunze kudiki software glitch. Kutangazve yako iPhone icharega ese ayo mapurogiramu akavhara zvakajairika, izvo zvinogona kugadzirisa dambudziko rinokonzera mitsara kuti ioneke pane yako iPhone's kuratidza.
Kana uine iyo iPhone 8 kana yekare modhi, tinya uye ubatise bhatani remagetsi kusvika slide kumagetsi kudzima inowanikwa pachiratidziri. Pane iPhone X kana modhi nyowani, panguva imwe chete pinda mubatirire bhatani bhatani uye bhatani rerutivi kusvikira slide kumagetsi kudzima rinoratidzika.
Rova zvakasimba chena uye tsvuku simba kuvake kubva kuruboshwe kurudyi kuvhara iPhone wako. Mirira masekondi mashoma, wobva wadzvanya wabata bhatani remagetsi (iPhone 8 uye kumberi) kana bhatani repadivi (iPhone X uye nyowani) kusvikira logo yeApple yaonekwa pakati pechiratidziro.
Mune zvimwe zviitiko, mitsara iri pane yako iPhone skrini ichave inodzivirira zvekuti haugone kuona chero chinhu pachiratidziri. Kana iyo mitsara pane yako iPhone skrini iri kutadzisa zvachose maonero ako, unogona kuitangazve nekuita yakaoma reset. A rakaoma Reset pakarepo anoshandura iPhone wako kure uye shure pamusoro.
Nzira yekumisikidza yakaoma iPhone inoenderana neyako iPhone yaunayo:
iPhone 6s uye apfuura mamodheru : Panguva imwe chete dzvanya uye bata pasi Bhatani repamba uye bhatani remagetsi kusvikira iwe waona Apple logo kupenya pahwindo.
iPhone 7 uye iPhone 7 Uyezve : Dhinda uye ubatise bhatani rezasi pasi uye bhatani remagetsi panguva imwe chete kusvikira marogo eApple aonekwa pakati pekona.
iPhone 8 uye mhando nyowani : Kurumidza kudzvanya uye kusunungura vhoriyamu kumusoro bhatani, wobva vhoriyamu pasi bhatani, wobva wadzvanya uye bata rerutivi bhatani. Kana iyo logo yeApple ikaonekwa pachiratidziro, buritsa bhatani rerutivi.
Zvinogona kutora masekondi 25-30 pamberi peiyo logo yeApple, saka iva nemoyo murefu uye usakanda mapfumo pasi!
Negadziriro yeparutivi Your iPhone
Tinokurudzira kutsigira yako iPhone nekukurumidza kana kuchine mitsara pachiratidziri. Iyi inogona kunge iri yako yekupedzisira mukana wekusimudzira kana yako iPhone yakanganisa zvakanyanya kana kutambura nekukuvara kwemvura.
Kutsigira yako iPhone kunoponesa kopi yeese ruzivo pairi. Izvi zvinosanganisira ako mafoto, vanobata, mavhidhiyo, uye zvimwe!
Unogona kushandisa iTunes kana iCloud kutsigira yako iPhone. Iwe uchazoda Tambo yeMheni uye komputa ine iTunes ku tsigira yako iPhone ku iTunes . Kana uchida negadziriro yeparutivi iPhone wako iCloud , haudi tambo kana komputa, asi iwe unozoda yakakwana iCloud nzvimbo yekuchengetedza kuchengetedza backup.
The mudziyo Firmware Update (DFU) kudzorera ndiyo yakadzika mhando iPhone kudzorera uye ndiro danho rekupedzisira isu tinogona kutora kubvisa software chinetso. Mhando iyi yekudzoreredza inodzima uye kuisazve kodhi yese pane yako iPhone, kuidzorera kune yayo fekitori zvisizvo.
Tinokurudzira zvakasimba kuchengetedza backup yeruzivo pane yako iPhone usati waisa muDFU modhi. Tarisa uone yedu nhanho-nhanho gwara kana iwe wagadzirira isa yako iPhone muDFU modhi !
Screen Kugadzirisa Sarudzo
Kazhinji yenguva, mitsara pane yako iPhone skrini ndeye mhedzisiro yedambudziko rehardware. Zvinogona kuitika kana iwe ukadonhedza yako iPhone pane yakaoma nzvimbo, kana kana yako iPhone ikaburitswa pachena kune zvinwiwa. Vertical mitsara pakuratidzwa kweiyo yako iPhone inowanzo chiratidzo kuti iyo tambo yeLCD haisisina kubatana kune iyo logic board.
Seta musangano kuApple Store yako yemunharaunda kusangana nemuchina, kunyanya kana yako iPhone yakafukidzwa neAppleCare + Dziviriro Chirongwa. Isu tinokurudzirawo Pulse , in-inoda kugadziriswa kambani inogona kutumira anozivikanwa tekinoroji zvakananga kumba kwako kana kuhofisi. Ivo vanogona kuve varipo kuti vakubatsire iwe kugadzirisa yakamira mitsara dambudziko pane yako iPhone mukati makumi matanhatu maminitsi!
Ndinovimba chinyorwa ichi chakubatsira iwe kugadzirisa yako iPhone kana kuwana yekugadzirisa sarudzo iyo ichakubatsira iwe kutora iyo skrini kuti ichinjwe nekukurumidza sezvazvinogona. Iye zvino zvaunoziva nei paine mitsara pane yako iPhone skrini, ita shuwa yekugovana ichi chinyorwa pasocial media nemhuri uye neshamwari! Siya chero mimwe mibvunzo yauinayo kwatiri mune chikamu chemashoko pazasi.